« Antananarivo Ligne 11 »: Ranty mitety ny renivohitra, aseho amin’ny haikanto - ewa.mg
News - « Antananarivo Ligne 11 »: Ranty mitety ny renivohitra, aseho amin’ny haikanto
Toy ny ahoana ny
fivezivezena sy fifamoivoizana eto Antananarivo, araka ny
fijerin’ny mpanakanto ? Mamaly izany ny ranty
« Antananarivo Ligne 11 », misokatra ho an’ny rehetra
etsy amin’ny lapan’ny Tanàna…
Mandeha « Ligne 11 ».
Fiteny teto Iarivo nivoaka tany amin’ny faramparan’ny taona 80,
ilana ny fandehanana an-tongotra. Nalaina tamin’izay ny anaran’ny
tetikasa “Antananarivo Ligne 11”, izay maka endrika fampirantiana
karazan-kanto, hitondran’ireo mpanakanto ny mpitsidika mitety ny
renivohitr’i Madagasikara. Fampirantiana izay nomanina sy
tohanan’ny Fondation H, miaraka amin’ny fiadidiana ny
tanànan’Antananarivo izy ity.
Mandalo etsy amin’ny lapan’ny Tanànan’Antananarivo ny
fampirantiana, manomboka rahampitso alarobia 10 marsa hatramin’ny
29 marsa. Hanasan’ireo mpanakanto ireo mpitsidika, hiara-hitety
an-tongotra sy anaty kanto an’Antananarivo izany. Aina Zo
Raberanto, Bloumorof, Carine HCR, Didier Montagné, Gad Bensalem,
Hazokely, Lowett, Sexy Expédition Yéyé, Tsiry Kely Panda, ary Yves
Robinson no nanambatra ny talentany, namoaka ny “Antananarivo Ligne
11”. Hahitana mpaka sary, mpanao sary hosodoko sy sary sokitra,
poeta sy mpanoratra, sns, izy ireo. Manampy izany ny haify, satria
misy maneho ny tsenakely fijanonana, fakana tohan’aina,
fisotrosotroana, izay manamarika indrindra ny tanàna maro eto
an’Iarivo Ireo efa nitsidika ny ranty dia afaka
manamafy fa manana fijery hafa kokoa momba an’Antananarivo rehefa
avy ao. Hain’ireo mpikanto ny namoaka ilay fijery manaitra ny
amparahatoka, mampivoitra ilay mampiavaka ny tanàna, eny na dia ny
korontandrontana vokatry ny fitohanan’ny fifamoivoizana, ny tsena,
ny alina mangina, sns. Hain’i Gad Bensalem tsara ny mandoko azy
anatin’ny lahatsoratra mirima, maneho izay kanto fonosin’ny
andavanandro izay. Toa fiainana hafa koa anefa ny
alin’Antananarivo, milamindamin-dratsy, araka ny asehon’ny sarin’i
Aina Zo Raberanto. Miavaka indrindra koa anefa ny fampivadiana ny
iainana, hita maso, ren’ny sofina, tsapan’ny tanana fa indrindra
manintona ny orona ary voarian’ny lela amin’ny tontolo foronin’ny
mpanakanto, toy ny nataon’i Myriam Mech amin’ny alalan’ny Sexy
Fijery hafa satria na eo aza ireo singa mampisy laza ratsy
an’Antananarivo, mivoaka koa ny hakanton’ny tanàna rehefa lokoin’ny
mpahay kanto: ambohipihaonana sy toerana manan-tantara ihany koa.
Tsy natao fahatany ny firindran’ny ranty, fa maneho ny hita rehefa
mandeha an-tongotra mihitsy: fitateram-bahoaka, lalana, tsena…
Misokatra amin’ny kanto Ivon’ny tanàna, maneho
ny endri-pitantanana ihany koa ny fisokafan’ny lapan’ny
Tanànan’Antananarivo ho an’ny zavakanto. Efa nisy ny fampirantiana
ireo hosodoko fananan’i Max et les ferailleurs manokana izay
norasina tao, tsy ela akory izay. Mitohy amin’ity “Antananarivo
Ligne 11” ity izany, izay mahakasika ny tanàna rahateo. “Misokatra
amin’ny zavakanto koa, ary manome lanja izany ny fiadidiana ny
tanàna. Ho maromaro ny hetsika ara-javakanto horaisina ato raha ny
vinavina, hoy ny nambaran-dRavelomantsoa Elia, tale misahana ny
zavakanto, ny kolontsaina ary ny fiarahamonina eo anivon’ny
kaominina Antananarivo Renivohitra.
Manohana ny sehakanto marolafy ny Fondation H, natsanganan’ny
filoha tale jeneralin’ny vondron’orinasa Axian. Angady nananana ny
“Antananarivo Ligne 11” izy ireo, ary tao amin’ny
toeram-pampirantian’ny Fondation H indrindra no nanomboka ity “dia
an-tongotra” ity. Nialoha izao, efa nanome sehatra ireo mpanakanto
teratany sy vahiny, nanohana ireo fandraisana anjara amina hetsika
iraisam-pirenena toa ilay “pavillon de Madagacscar” nentin’i Joël
Andrianomearisoa, nandritra ny “Biennale de Venise”, ny taona 2019
izy ireo. Nanohana hatrany ny “Prix Paritana” hatramin’ny
nanombohan’ny taona 2016 ihany koa.
L’article « Antananarivo Ligne 11 »: Ranty mitety ny renivohitra, aseho amin’ny haikanto a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 08/03/2021
Efa nigadra teny Antanimora sy Tsiafahy: tratran’ny polisin’ny BC indray ny jiolahy nisoloky 30 tapitrisa Ar
Nidoboka am-ponja fanintelony indray ny jiolahy iray 39 taona voarohirohy tamina raharaha fisolokiana avo lenta izay nahazoany vola 30 tapitrisa Ar noho ny resaka fanomezana vaovao tsy marina ny polisin’ny BC4 Anosy…Voasambotry ny polisin’ny BC4 Anosy, ny 19 jona 2019 lasa teo teny Tongarivo Tanjombato ity jiolahy voarohirohy amina fisolokiana vola 30 tapitrisa Ar ity. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy, ny 25 mey 2019, nahazo angom-baovao tamina lehilahy iray ny polisin’ny BC4. Nilaza ity jiolahy nanome vaovao tsy marina ny polisy ity fa misy olona telo (mpivady malagasy sy teratany vahiny ary lehilahy iray hafa) mikononkonona hanao fakana an-keriny teratany vahiny. Voalazany tamin’io fotoana io fa ilay teratany vahiny vadin’ilay vehivavy gasy no halain’izy ireo an-keriny. Nohamafisin’ilay mpanome vaovao koa fa hoe manana fitaovam-piadiana mahery vaika ireto mpaka an-keriny ireto. vantany vao nahare izany ny polisin’ny BC4 dia nandray andraikitra avy hatrany tamin’ny fanaraha-maso akaiky ireo olona voalaza ireo. Natao ny fisavana ny trano kanefa tsy nahitana na inona na inona, eny fa na dia ilay basy voalaza aza. Nandritra ny fanadihadiana natao no nahafantaran’ny polisy fa efa nametraka fitoriana ity jiolahy ity teny amin’ny polisy ekonomika ilay vehivavy vadim-bazaha. Fantatra tamin’izany fa ilay lehilahy tonga nampilaza tao amin’ny BC no nisoloky vola 30 tapitrisa Ar ilay vehivavy vadim-bazaha tamina resaka fitsaboana nentim-paharazana. Taorian’ny fitsirihana sy fikarohana nataon’ny polisy dia fantatra fa tsy nisy akory ilay fikasana haka an-keriny teratany vahiny. Ny tanjon’ilay mpanome vaovao tsy marina tamin’izany dia ny mba tsy hitakian’ireo olona voasolokiny tamin’ny fitsaboana nentim-paharazana. Niaiky ny heloka vitany izy nandritra ny famotorana nataon’ny polisy.Jean ClaudeL’article Efa nigadra teny Antanimora sy Tsiafahy: tratran’ny polisin’ny BC indray ny jiolahy nisoloky 30 tapitrisa Ar a été récupéré chez Newsmada.
Noraisin’ny Praiminisitra Ntsay Christian, ny 3 jona teo, ny delegasiona avy amin’ny Tahirimbola iraisam-pirenena (FMI), notarihin’i Haris Charalambos Tsangarides. Anton-dian’izy ireo ny hanombana ny fandaharanasa toekaren’i Madagasikara, vatsin’ny FMI vola, ao anatin’ny Fampindrambola nitarina nohamoraina (Fec), andiany fahadimy. Nilaza ny praiminisitra fa « manan-danja ny fiaraha-miombon’antoka amin’ny FMI satria manara-maso akaiky antsika ireo mpiara-miombon’antoka teknika sy vola (PTF) amin’ny fampandrosoana toekarena hisian’ny fitomboana toekarena ».Azo antoka ny fampandrosoanaNanome toky koa izy fa azony antoka ny hisian’ny fampandrosoana, ny fitomboana toekarena eto Madagasikara sy indrindra, ny fitohizan’ny fiaraha-miasa toy izao ary hanokatra fiaraha-miombon’antoka vaovao.Ho an’i FMI, nanamafy ny voalazan’ny praiminisitra i Haris Charalambos Tsangarides fa matoky izy raha jerena ny vokatra vitan’ny fanjakana malagasy ary vonona hanohy ny fiaraha-miasa ny FMI.Njaka A. L’article Fec fahadimy: tonga eto amintsika ny FMI a été récupéré chez Newsmada.
Radanoara Julien : “Aoka ho mailo amin’ny variant”
“Tokony hitandrina mafy isika, fa mety misy hanao fanahy iniana any. Tsy mahafaly ny olona ny amin’ny mbola tsy fisian’ny Coronavirus karazana Delta izany eto, mihena ny isan’ny marary…” hoy ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena, Radanoara Julien. Mila fitandremana mafy dia mafy ny mpivezivezy eto.Misy sambo koa mandalo aty Madagasikara. Ahoana koa ny amin’izany? Entina mitsidika tanàna, ny mpandeha amin’izany. Tokony handraisan’ny fanjakana fepetra izany. Satria mety misy voan’izany Delta izany ny mpandeha, raha manaiky ny fandalovan’izany sambo izany isika. Marina fa mety mijaly ny sehatry ny fizahantany, nefa ny fahasalaman’ny besinimaro no tandrovina. Ferana ny fivezivezena any EoropaNy firenena afrikanina sy amin’ny tany an-dalam-pandrosoana rehetra no tena isehoan’ny fitakiana fanaovana vaksiny Covid-19. Fomba iray any Eoropa koa hisakanana an’ireo mpifindra monina an-tsokosoko ho any aminy. Ny olona avy aty amin’ny tany mahantra no tena mila ravinahitra any Eoropa. Nefa ny aty amin’ny tany mahantra no tsy manao vaksiny betsaka indrindra.Ankolaka izany ny faneren’ny eropeanina ny fanaovam-baksiny aty amin’ny tany mahantra. Dikan’izany, tsy misy tafiditra any Eoropa raha tsy vita vaksiny. Ferana ny fivezivezen’ny avy aty amin’ny tany mahantra. Na ny olona hipetraka any Eoropa aza, efa voafetra ihany koa.Fiarovan-tena amin’ny firenena iray izany na amin’ny lafiny fahasalamana na amin’ny sehatry ny toekarena. Misy amin’ireny mpandraharaha ara-toekarena ireny no mivezivezy. Koa raha tsy manana ny fanamarinana ny fahavitana vaksiny, ho sahirana vao tonga any Frantsa, ohatra.R.Nd.L’article Radanoara Julien : “Aoka ho mailo amin’ny variant” a été récupéré chez Newsmada.
Lapan’i Tsimbazaza: ketrehina ho lehiben’ny mpanohitra ny Me Hanitra
Mirona tsikelikely mankany amin’ny depiote Razafimanantsoa Hanitra. Hita taratra tato ho ato amin’ny fanehoan-kevitry ny depiote mpomba ny fitondrana koa ny mpahay lalàna sasany ny hametrahana depiote ho lehiben’ny mpanohitra. Miainga amin’ny fanazavana sy ny fahitan’izy ireo ny lalàna mifehy ny fanoherana izany. Nitondra ny heviny momba izany ny depiote IRD, voafidy tany Ikongo, Razafitsiandraofa Brunel. Eo koa ny mpahay lalàna, Imbiky Herilaza. Itovian’izy ireo hevitra fa miaina sy velona ny lalàna ary manaraka ny takian’ny fiarahamonina sy ny raharaha politika. “Antony nahatonga ny fanapahana ka haverina hatao vaovao ny lalàna ary hatsaraina kokoa. Miainga avy amin’ny Antenimierampirenena ny raharaha politika rehetra na ny fanendrena ny praiminisitra na ny fiaraha-miasa eo anivon’ny governemanta. Napetraka io sata mifehy ny mpanohitra io hahafahana mihaino ny vitsy anisa”, hoy ity mpahay lalàna ity.Hanilika tanteraka an-dRavalomanana … Na tsy mivantana aza, mirona kokoa any amin’ny depiote Razafimanantsoa Hanitra izy ireo ary mitsipaka marindrano ny filoha nasionalin’ny Tim, Ravalomanana Marc, ho amin’izany toerana izany. Nohazavainy koa fa tsy ilay fidinana an-dalambe na fikomiana no haha zava-dehibe ny mpanohitra. “Any anaty adihevitra demokratika no mametraka ny fanoherana. Hatolotra anatin’ity rafitra solombavambahoaka ity ny olona hitarika izany fanoherana izany. Afaka manolotra tolo-dalàna izy. Afaka mifanerasera amin’ny praiminisitra koa”, hoy ihany izy. Azony atao koa ny manasazy ny governemanta amin’ny alalan’ny fitsipahan-pitokisana. Tsy mifanalavitra amin’izany ny hevitra voizin’ny IRD eny Tsimbazaza. Andrasana ny ho tohiny.Synèse R.L’article Lapan’i Tsimbazaza: ketrehina ho lehiben’ny mpanohitra ny Me Hanitra a été récupéré chez Newsmada.
BEPC – CISCO TELO: niakatra ny taham-pahafahana
60,79% ny taham-pahafahana BEPC ho an’ny Cisco Avaradrano, izay nitombo be raha nitaha ny tamin’ny taon-dasa 38%, hoy ny fanazavan’ny tompon’andraikitry ny Cisco, omaly. Mihoatra ny 50% hatrany ny taham-pahafahana hatramin’izay fa nisy ny lesoka tamin’ny taon-dasa ka nisedran’ny mpiadina olana teo amin’ny laza adina rehetra. Hivaly anio ny fanadinana ary efa nipetraka teny amin’ny toerana manokana ny lisitr’ireo mpiadina afaka tamin’ny BEPC, hatramin’ny alina. Ho an’ny Cisco Antananarivo Atsimondrano, niakatra 10% raha mitaha ny tamin’ny taona 2019 ny valim-panadinana BEPC. Nahafa-po ny vokatra ary hivaly anio izany, hoy ny fanamarihan’ny tompon’andraikitra. Tsara koa ny vokatra satria nisondrotra ny taham-pahafahana BEPC ho an’ny Cisco Antananarivo Renivohitra tamin’ity taona, hoy ny lehiben’ny Cisco. Vita avokoa ny asa rehetra ary efa lasa eny amin’ny minisitera mpiahy miandry fankatovana ny famoahana ny taham-pahafahana. Heverina fa hivoaka anio ny lisitra misy ny anaran’ireo nahazo ny mari-pahaizana BEPC. Nahafa-po ny vokatra raha zohina ny zavatra niainan’ny mpiadina sy ny mpampianatra amin’ny ankapobeny tamin’ity taom-pianarana ity, hoy ny mpampianatra.Vonjy A. L’article BEPC – CISCO TELO: niakatra ny taham-pahafahana a été récupéré chez Newsmada.
Sabotsy-Namehana : Mirongatra ny asan-jiolahy ao Andrefantsena Iadiambola
Tato ho ato dia nahitana hala-botry sy fanendahana tao Andrefantsena-Iadiambola ao amin’ny kaominina Sabotsy-Namehana. Ny sabotsy hariva lasa teo sahabo tamin’ny 8 ora sasany tany ho any dia nisy fanendahana narahana vono tamin’iny Faritra voalaza etsy ambony io. Nendrasany efa eo akaikin’ny vavahadibe hidirana amin’ny trano izay somary maizimaizina no nanarataon’ny jiolahy ny asa ratsiny. Taitra ny tompontrano raha nahare zavatra tao nidoboka be ka namoa an’ilay vavahady. Rifatra nandositra ilay mpanendaka vao nahita izany, ny manodidina rahateo efa nanomboka nivoaka. Marihana fa naratra mafy ilay tovolahy izay miasa amin’io trano io ary voatery nampidirina hopitaly notsaboina. Tsy vao volohany io toe-javatra io. Dominique R. L’article Sabotsy-Namehana : Mirongatra ny asan-jiolahy ao Andrefantsena Iadiambola est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Sabotsy-Namehana : Mirongatra ny asan-jiolahy ao Andrefantsena Iadiambola a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fête de la musique : Un concours de chant à l’Alliance Française d’Antsiranana
(photo d’archives) À un mois de la fête de la musique, qui normalement est célébrée le 21 juin, l’Alliance Française d’Antsiranana organise un concours de chant baptisé “Alefa”. L’appel à participation s’adresse aux artistes, chanteurs, musiciens et interprètes, amateurs ou professionnels. Le concours comprend deux catégories, pour les moins de 18 ans et les plus de 18 ans. L’inscription est entièrement gratuite à l’accueil de l’Alliance Française d’Antsiranana et ce, jusqu’au 10 juin 2021. La présélection se déroulera, sans public, le 12 juin à 15 h. À noter que chaque participant pourra faire une prestation d’une durée d’une minute, accompagné de musiciens ou avec une musique préenregistrée sur une clé USB. La finale du concours “Alefa” aura lieu le vendredi 18 juin 2021 à l’Alliance Française. Les organisateurs promettent de nombreux lots pour les participants, donc avis aux amateurs de chants désireux de se faire connaître du grand public. Anja RANDRIAMAHEFA L’article Fête de la musique : Un concours de chant à l’Alliance Française d’Antsiranana est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Fête de la musique : Un concours de chant à l’Alliance Française d’Antsiranana a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Tolagnaro: mpitondra fivavahana nanolana zaza 5 taona
Ankizivavikely iray vao 5 taona monja no voalaza fa lasibatry ny herisetra ara-nofo nataona mpitondra fivavahana iray ao Tolagnaro, ny volana marsa 2020. Taorian’ny fitsarana ny raharaha, ny volana mey teo, afaka madiodio ilay mpitondra fivavahana. Ilay ankizivavikely kosa nitondra takaitra ara-batana sy ara-moraly taorian’ny nanjo azy. « Indray alarobia izay, nitantara tamin’ny renibeny mpitaiza azy io ankizivavikely io fa misy bay ny fitaovam-pananahany. Nijery izany ilay ramatoa ary hitany fa simba tokoa ilay zafikeliny, nisy ra ihany koa ny takon-kenatra nanaovany », hoy ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray. Tsy nilaza ilay olona nahavita izany anefa ilay ankizivavikely ka namonjy ny sekoly nianarany ilay renibeny. Tamin’izany indrindra, nasain’ireo relijiozy namonjy ny « centre Vonjy » ilay ramatoa.Henintsoa HaniL’article Tolagnaro: mpitondra fivavahana nanolana zaza 5 taona a été récupéré chez Newsmada.
Hamaha ny olan’ny fitohanan’ny fifamoivozana: tombanana ho fiara 48 000 isan’andro ny hampiasa ny Rocade Iarivo
Notokanan’ny filoha Rajoelina Andry, omaly, ny fahavitan’ny lalam-baovao migodana antsoina hoe Rocade Iarivo mampitohy an’Andranobevava sy ny Boulevard de Tokyo (By-Pass). Manaraka ny fenitra tanteraka ary hositrahin’ny vahoaka sy hampihena ny fitohanan’ny fifamoivoizana eto Antananarivo izany. Efa vita sonia, ny taona 2011, ny fifanarahana hanatanterahana ny tetikasa ary izao vita izao, 10 taona aty aoriana. Miisa 48 000 ireo fiara hifamoivoy amin’izany lalana izany. Mahazaka fiara roa mandroso sy fiara roa miverina izany, mirefy 8,2 km, ahitana ampahan-dàlana telo. Ny voalohany, ny Rocade Atsinanana, mampitohy ny Boulevard de Tokyo – By-Pass amin’Ambohimahitsy, mirefy 3,8 km. Ny Rocade Avaratra-Atsinanana mirefy 3,426 km ny faharoa ary mampifandray an’Ambohimahitsy amin’Andranobevava. Mirefy 984 m ny ampahany fahatelo, mampitohy ny rond-point Nanisana sy ny làlana Ankadindramamy. “Nanomboka izao fotodrafitrasa izao isika ary nanangana sy nitokana azy. Hisitraka azy ny vahoaka ary miasa ho azy ireo rahateo ny mpitondra”, hoy ny filoha Rajoelina Andry, tamin’ny fitokanana ny fahavitan’ny lalambe migodana Rocade Iarivo. Notsiahiviny fa natao hamahana olana amin’ny fivangongoan’ny mponina sy noho ny fiitaran’ny tanàna ary koa ny fitomboan’isan’ny fiara izao lalana izao.Ialana amin’ny fitohanan’ny fifamoivoizana, araka ny nambarany. Zava-dehibe ny tetikasa amin’ny hanavaozana an’i Madagasikara sy Antananarivo, handrindrana ny fivezivezen’ny mponina. “Tanjona ny hanatsarana ny andavanandron’ny mponina sy hanavaozana ny tanàna. Tsy mora izany ary mila manana vina sy paikady miaraka amin’ny fandrindrana ny fomba fiasa”, hoy ihany izy.Fampandrosoana mirindra ho an’ny tanàna manodidinaNanamafy izany ny minisitry ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, Andrianainarivelo Hajo, anisan’ny nanatanteraka sy nitantana ny asa ary nilaza fa natao hampandrosoana ny faritra avaratr’Antananarivo sy ireo kaominina manodidina miaraka amin’ireo mpandraharaha io lalana io. “Hananantsika fandrosoana mirindra sy hanatsarana ny tanàna sy manodidina. Mbola hitohy ny asa amin’ny fanatsarana ny lalana Marais Masay hatreny Ankorondrano. Eo koa ny lalana fizorana amin’ny RN2 sy ny RN3. Manana lalana manaraka fenitra Antananarivo sy ny mponina”, hoy izy.Etsy andaniny, hisy zotram-pitaterana telo hampiasa io lalana io, hanamora ny fivezivezen’ny mponina.Synèse R. sy i FanoL’article Hamaha ny olan’ny fitohanan’ny fifamoivozana: tombanana ho fiara 48 000 isan’andro ny hampiasa ny Rocade Iarivo a été récupéré chez Newsmada.
Minisitra Andrianainarivelo Hajo : « Mitondra hevitra sy mitsinjo lavitra isika…”
Nizara kara-tany, miisa 9 000 tany amin’ny kaomi­nina Kiangara, Ankazobe ny minisitry ny Fanajariana ny tany sy ny fananan-tany (MaTSF), Andrianainarivelo Hajo, omaly. Nanafatrafatra ny va­hoaka sy ireo tompon’andraikitra ny tenany tamin’izany. “Ilaina arahana ny lalàna sy ny fitsipika. Mitsinjo lavitra sy mitondra hevitra rehefa mitondra. Manamora ny hetahetan’ny vahoaka ary mitady vahaolana izany tompon’andraikitra izany, ahafahana mandroso”, hoy izy. Nante­riny tamin’izany fa andraisana fepetra ireo mety mihoa-pefy amin’ireo mpiasan’ny minisitera. Ialohavan’ny fanitsiana izany. Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy tany an-toe­rana ny fizarana kara-tany faobe ho an’ny faritra Anala­manga. Maherin’ny 2 8000 ireo hozaraina, iarahana amin’ ny Casef. Mamaha ny olana eny anivon’ny fiarahamonina sy ny mety ho lonilony ny fa­hazoana izany ary ho lova mipetraka ho an’ny taranaka, araka ny nambaran’ny minisitra. Tsy azo ekena kosa anefa ny fakan’ny orinasa kara-tany. “Misy fepetra tsy maintsy ara­hina vao azo raisina ny fanapahan-kevitra momba izany”, hoy izy. Ferana tsy hihoatra ny 10 ha kosa ny velarana ho an’ny kara-tany iray. Misi­traka izany ireo efa nana­mainty molaly.Synèse R.L’article Minisitra Andrianainarivelo Hajo : « Mitondra hevitra sy mitsinjo lavitra isika…” a été récupéré chez Newsmada.